January 9, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'January 9th, 2017'
January 09, 2017 – Degmada Cadale ayaa waxa ay ka mid tahay Degmooyinka ugu taariikhda dheer ee dalka Soomaliya , waxeyna ku taalaa xeebta badweynta Hindiya meel magaalada caasimadda (Xamar) u jirto boqol iyo kontan kiilometer (150km), uguna aadan dhanka qorax soobaxa. Degmada cadale ayaa waxaa lagu yaqaan markii aad u dhawaato inaad arkeysid geedo …
Muuqaalka Degmeda Cadale (VIDEO)
Degmada Cadale waa mid aad ugu fiican dhinaca dalxiiska, waxeyna leedahay xeeb aad u dheer, iyo deegaan aad u quruxbadan. Cadale ayaa kamid ahayd goobihii uu gumaytihii Talyaaniga xarumo ciidan ka furtay, waxaana Degmedani ay ahayd mid indhaha daxiisayaal badani soo jiidatay, waana goob ilaahey deeq bad iyo mid beriba ku manaystay.
Magaca iyo Sawirka Ninkii Fuliyay Weerkii Magaalada Qudus oo la Shaaciyay (VIDEO)
January 09, 2017 – Ninkii weerarka gaariga xamuulka ah ka fuliyaya magaalada ay falastiiniyiinta leeyihiin ee ay Yahuudu xooga ku haysato ee Qudus ayaa la sheegayaa in ninkaasi lagu magacaabijiray Fadi Qunbar da’diisu ahayd 28 jir. Ninkan ayaa gaariga nuuca Xamuulka qaada ah waxa uu ku weeraray askar Yahuud ah oo taagneed degmada Armon Hanatziv …
Weerkii Magaalada Qudus (VIDEO)
Ninkan ayaa gaariga nuuca Xamuulka qaada ah waxa uu ku weeraray askar Yahuud ah oo taagneed degmada Armon Hanatziv ee magaalada Qudus, waxaana weerarkaasi ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Ra’iisalwasaaraha dalka Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ninkii weerarka ka gaystay magaalada Qudus uu taageersanaa kooxda …
January 09, 2017 – HOLLACO KHAN oo ahaa nin madax ka ahaa ciidankii dalka Mangooliya ee burburiyay boqortooyadii cabaasiyiinta ee waagaa ka talin jirtay dhulka maanta lagu magacaabo ciraaq iyo Suuriya isagoo ninkani laayay wixii shacab ahaa ee ku sugnaa magaalooyinkaasi. Waxaase markii danbe umadda Muslimiinta u aarguday oo dagaal ku burburiyay ciidamadii Mangooliyiinta boqortooyadii muslimiinta …
Weerarkii Boqortooyada Mangooliyiinta (VIDEO)
Waxaase markii danbe umadda Muslimiinta u aarguday oo dagaal ku burburiyay ciidamadii Mangooliyiinta boqortooyadii muslimiinta ee waagaasi ka jirtay dalka Masar oo dagaal kula wareegay magaalooyinka Baqdaad iyo Dimishiq oo labadoobuba ahaa magaalooyin xarun u ahaa dunida Islaamka ee waqtigaasi. Boqortooyadii Mangooliyiinta ee waagaasi jirtay ayaa ahayd mid aad u xoog badan iyadoo ciidamadoodu ay …
Madaxweynaha Galmudug oo ka Hadlay Mooshin Xil ka Qaadis ah ee Laga Gudbiyay (Dhagayso)
January 09, 2017 – Shalay ayay ahayd markii Xildhibaano gaaraya 50 Xildhibaan ay gudbiyeen Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha maamulka Galmudug mudane, Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa waxaa arintaasi maanta ka hadlay madaxweyne Guuleed oo weli ku sugan Magaalada Muqdisho. Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay isaga oo ka hadaayay xalay xaflad ka dhacday Magaalada Muqdisho …
Madaxweynihii hore ee Dalka Iran Cali Rafsanjani oo Xalay Geeriyooday (VIDEO)
January 09, 2017 – Madaxweynihii hore ee dalka Iran Cali Akbar Rafsanjani ayaa ku geeriyooday caasimadda dalka Iran ee Tihraan kadib markii la sheegay inuu wadnuhu istaagay. Rafsanjani oo ahaa 82 sano jir ayaa waxa uu ahaa Madaxweyne caan ka noqday dunida, waqtgii uu madaxda ka ahaa dalka Iran. Rafsanjani ayaa ahaa Madaxweyne intii u …
Rafsanjani oo Geeriyooday (VIDEO)
Rafsanjani oo ahaa 82 sano jir ayaa waxa uu ahaa Madaxweyne caan ka noqday dunida, waqtgii uu madaxda ka ahaa dalka Iran. Rafsanjani ayaa waxa uu ahaa haatan Madaxa Guddiga Xalliya khilaafaadka u dhexeeya Baarlamaanka iyo Golaha Hogaaminta dalka Iran.
DAAWO: Sida ay u Dhacday Doorashadii Aqalka Sare ee Lagu Doortay Wariye Muna Cumar Xasan (VIDEO)
January 09, 2017 – Shalay oo ahayd maalin axad ah ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay wareegii koowaad ee Doorashada Xildhibaanada Gobolada Waqooyi ka soo gelaya Aqalka Sare ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Hadaba shalay ayaa waxaa xarunta ay ka socoto doorashadu waxaa lagu doortay lix Xildhibaan, oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney warire …